The world's ugliest kit 2010/11 by Vixon | Page 131 | PESGaming
hey Vixon The Master
could You make fantasy nike kits for Amica Wronki?
home - red away - white and gk-blue
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Arsenal</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Aston Villa</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Blackburn</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Bolton</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Chelsea</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Everton</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Fulham</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Liverpool</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Manchester City</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Manchester United</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Newcastle</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Norwich</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Queens Park Rangers</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Stoke</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Sunderland</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Swansea</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Tottenham</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">West Bromwich</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Wigan</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Wolverhampton</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Amburgo</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Augusta</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Bayer Leverkusen</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Bayern Monaco</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Borussia Dortmund</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Borussia Monchengladbach</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Colonia</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Friburgo</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Hannover 96</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Herta Berlino</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Hoffenheim</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Kaiserslautern</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Mainz</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Norimberga</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Schalke 04</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Stoccarda</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Werder Brema</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Wolfsburg</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Atletico Bilbao</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Atletico Madrid</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Barcellona</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Betis</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Espanyol</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Getafe</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Granada</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Levante</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Maiorca</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Malaga</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Osasuna</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Racing Santander</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Rayo Vallecano</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Real Madrid</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Real Saragozza</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Real Sociedad</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Sevilla</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Sporting Gijon</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Valencia</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Villarreal</span>
<span style="font-size: 21pt; line-height: 100%;">SERIE B</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Albinoleffe</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Ascoli</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Bari</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Brescia</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Cittadella</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Crotone</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Empoli</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Grosseto</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Gubbio</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Juve Stabia</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Livorno</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Modena</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Nocerina</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Padova</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Pescara</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Reggina</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Sampdoria</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Sassuolo</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Torino</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Varese</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Verona</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Vicenza</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">CD Nacional Madeira</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">SC Olhanense</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">FC Paços de Ferreira</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">FC Porto</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Rio Ave FC</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Sporting Lisbona CP</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Vitória de Guimarães SC</span>
<span style="font-size: 14pt; line-height: 100%;">Vitória de Setúbal FC</span>
F.C. Hansa Rostock Fantasy
quisiera saber como se podrian bajar???
estaria muy agradecido amigo esperaria tu respuesta es para pes 2012 pc
English: Sensei Vixon03 can not see the images of many kits, please can you do something? or put a pack with all the kits, there are many who dreamed of having, pleaseeeeee
Thanks! and sorry for my bad English ^ ^ hehehe
Spanish: Sensei Vixon03 no se puede ver las imagenes de muchos kits, por favor puedes hacer algo? o poner un pack con todos los kits, hay muchos que soñaba con poder tener, porfiiiiiiii
Gracias!! y perdon por mi mal ingles jijiji ^^
Vixon03 como la mayoría no se ven no se si los has puesto, porfavor me podrias hacer bien los de las siguientes selecciones:
Vixon03 as most do not look if you post, please could you do me well for the following selections:
Could you make sunderland's home kit with adidas and invest in africa as sponsor please
If someone can delete this, I appreciate it.
Hey Vixon have you still got all your kit bases for download on the net?
If so can I possibly have the link
Cheers matey :happy:
I cannot see these